पाएनन् रविले न्याय ! एक लाख धरौटीमा रन्जना अदालतवाट छुटेपछि निरास भएका ससुराले यसो भने (भिडियो हेर्नुस्) – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on पाएनन् रविले न्याय ! एक लाख धरौटीमा रन्जना अदालतवाट छुटेपछि निरास भएका ससुराले यसो भने (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, ३ पुष । अस्ट्रेलियामा पढ्न गएकी श्रीमती रञ्जना मैनालीको घट नाले नयाँ मोड लिएको छ । उनी नेपाल फर्के लगतै श्रीमान रविले देह त्याग गरेपछि त्यो घट नामा विहिवार अदालतले आदेश दिएपछि नयाँ मोड लिएको हो । चितवन जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सो सम्बन्धि मु द्दामा विहिवार रञ्जनालाई अदालतले एक लाख रुपैया धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
रञ्जनाले गरेको अस्वभाविक ब्यवहारका कारण रविले देह त्याग गरेको भन्दै रविका परिवारले रञ्जना विरुद्ध अदालतमा आत्म ह त्या दुरु त्साहन मु द्दा दायर गरेका थिए । एक साता देखि थुनामा रहेकी रञ्जनाको विषयमा विहिवार वहस सकिएपछि अदालतले एक लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो । रञ्जनालाई अदालतले रिहा गरेपछि रविका परिवार आक्रो शित भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो छोराको जिवनको मुल्य एक लाख रुपैया हुन नसक्ने भन्दै आफुहरु अन्यायमा परेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
लामो समयसम्म श्रीमानलाई आर्थिक स्रोतको मात्र माध्यम बनाएर धो का दिएको भन्दै परिवारका आफन्त आक्रो शित भएका छन् । अदालतमा बुधवार बुहारीका माइती र घर पक्षका आमनेसामने भएका थिए । बुधवार रविका परिवारको बयान सकिएको थियो । विहिवार रञ्जनाको वयान पछि अदालतले एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो । ३ वर्ष अगाडी मागी बिवाह गरेका रन्जना र रबि मैनालीको सम्बन्धमा फाटो आए संगै श्रीमती रन्जनाकै कारणले श्रीमानले मृ त्य बरण गर्न परेको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका हुन् ।
अस्ट्रेलिया पढ्न गएकी श्रीमतीलाई श्रीमानले नेपाल बसेर दुख गरेर पढ्न पैसा पठाउँदै आएको र श्रीमती ३ वर्ष पछि नेपाल आउँदा श्रीमतीले विमानस्थल देखि गरेको दुर्व्यवहारकै कारण श्रीमानले बि स से वन गरेर म रेको भनेर आफन्तले भन्दै आएका छन । बुधवार जिल्ला अदालत चितवनमा स्व रबि रुवाली र श्रीमती रन्जना मैनालीको माईति पक्षको उपस्थिति रहेको थियो। रविको आमाले आफ्नो आ क्रोस पोख्दै गरेको भिडियो अहिले सार्वनजिक भएको छ त्यस्तै घट नाको बारेमा रबिका दाईले थप नयाँ रहश्य सार्वजनिक गरेका छन।
रञ्जनाका बुवाले अदालतवाट आफुले न्याय नपाएको प्रतिकृया दिए । आफुले छोरा पनि गु माउनु पर्ने जसको कारणले छोराको ज्यान गयो उसैलाई उल्टै सम्पत्ती पनि दिनुपर्ने अदालतको निर्णय चित्त नबुझेको बताए । उनले हिजो हुनुपर्ने निर्णय आज सम्म रोकेर रातभरीमा चलखेल भएको आशंका ब्यक्त गरे । अदालत परिसरमा निकै निरास देखिएका रविका बुवाले भने, मसंग बोल्ने शब्दै छैन एकातिर छोरा गुमेको छ अर्को तिर छोरीजस्तै मानेर घरजग्गा समेत बेचेर पढाएको छोरीले यस्तो अवस्थामा पुर्याइन् । अब मैले के भन्नु रु
उनले अष्ट्रेलियावाट नेपाल फर्कदा आफुहरुलाई जानकारी नदिई आएको र नेपाल आएपछि पनि घरमा नआई माइतवाटै अष्ट्रेलिया फर्कन लागेकी थिइन् अरुकुरा अब आफै बुझ्नुस्, उनले भने, अदालतको मानहानी हुनेगरी अरु बोल्न सक्दिन । उनले रञ्जनालाई थुनछेकमै राखेर अनुसन्धान गरेको भए रविको आत्मालाई सान्त्वना हुनसक्ने रविका बुवाले प्रतिकृया दिए ।
← ‘सेन्टी भाइरस’को गीत ‘फनफनी’ सार्वजनिक → कमलाको जन्मदिनमा अमृतले लेखे मनछुने स्टाटस् ( पढ्नुहोस्)